Nzira yekutarisa iyo World Cup mitambo inorarama pane yedu Ubuntu? | Kubva kuLinux
Nzira yekutarisa iyo World Cup mitambo inorarama pane yedu Ubuntu?
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Applications, FileLet's UseLinux
P2PTV inzira yekufambisa uye kutepfenyura munguva chaiyo yezvinyorwa zvekuona (mavhidhiyo, terevhizheni, nezvimwewo) kuburikidza neInternet network uchishandisa maumbirwo ehurongwa P2P, uko node dzega dzega dzinobatana kune mamwe maodhi kuti dziwane iyo hova video uye odhiyo, panzvimbo pekushandisa servidor pakati, sep IP-based terevhizheni (IPTV).
Chii chandinoda kuti ndione sarudzo?
Zvakanaka, kutanga kwezvose, zvaunofanirwa kuita ndizvo enda kune peji uko nhepfenyuro dzepamoyo dzakanyorwa. Imwe yeanonyanya kufarirwa ndeye roadirecta.orgBhokisi rakakosha re peji rinonyora mitambo yakakosha yezuva. Ini ndinokurudzira kuti, kuti utange kuzvidzidzira nemusoro wenyaya, iwe tinya pane mamwe acho kuti uone sarudzo dzinovhurwa. Nekukurumidza, iwe unozoona kuti yega yega mutambo inowanikwa mune akasiyana mavhezheni. Mune mamwe mazwi, kune mitambo mune iyo P2P ikholamu inoti "HAPANA" uye mimwe iyo inoti "P2P." Izvi zvinoreva kuti izvo zvadzinoti "HAPANA" zvinogona kutariswa kuburikidza neflash, mms (Izvi zvinogona kuonekwa neTotem nekungodzvanya pane iyi link), nezvimwe.
Muchikamu chino, izvo zvandiri kuda kutsanangurira kwauri maitiro ekuona avo vanoti "P2P". Uri kuzoona kuti mu "Type" ikholamu vane maitiro akasiyana: vamwe vanoti "SopCast", vamwe "Veetle", zvichingodaro. Aya ndiwo marongero akasiyana ekuona p2ptv. Mune ino kesi, ini ndakasarudza imwe yeakanyanya kufarirwa: SopCast.
Chinhu chekutanga kuita, saka, ndeche dhawunirodha SopCast mutengi uye woiisa. Izvi zvakapusa nyore muUbuntu.
Kutanga, tinowedzera iyo PPA munyori:
sudo yekuwedzera-apt-repository ppa: jason-scheunemann / ppa
Ipapo isu tinogadziridza:
Usati waisa chirongwa ichi, unofanirwa kuisa iyo sp-auth package, iyo iwe yaunogona kurodha pasi kubva pano. Pakupedzisira, isu tinoisa iyo Sopcast Player.
sudo apt-tora kuisa sopcast-mutambi
Kana iwe ukashandisa Fedora, unogona kurodha pasi iyo RPM kubva pano.
Kana chirongwa changoiswa, tinogona kuchiwana nekuenda ku: Zvishandiso> Audio & Vhidhiyo> Sopcast Player. Zvisinei, hazvizove zvakakosha kuti uzarure nenzira iyoyo. Kubva ikozvino zvichienda mberi, patinodzvanya neinternet browser pane sopcast chinongedzo, chirongwa ichi chinobva chavhura otamba vhidhiyo.
Saka regai roadirecta.org, isu tinotsvaga mutambo uriko parizvino kutenderera uye tione kana iwe uine sarudzo yekuutarisa kuburikidza nesopcast. Kana iwe uine iyi sarudzo, tinobaya pane iyi link, tinotaurira Firefox kuti ivhure iyo neSopcast Player uye isu tinomirira kwechinguva kuti chirongwa ichi chiite buffering inodiwa.
Heano mazano maviri ekupedzisira ekuchengeta mundangariro: kana iwe ukavhura vhidhiyo ne sopcast-player uye inotanga kutamba, vhidhiyo inogona kutaridzika kunge yakaipa pakutanga. Zvinotora chinguva kusvikira zvasvika kune yakanaka buffering (+ 90%) saka haigone kunamira nguva dzese kana zvese kutaridzika kunge pikisheni. Saka, zvishoma zvekushivirira kuti mushure memasekondi ekutanga makumi matatu-30 vanotaridzika kunge vakanaka. Kurudziro yechipiri ndeiyi inotevera: tsvaga mitambo irikutamba (rarama): Kana iri 3 masikati uye iwe uchida kuona mutambo wakaburitswa mangwanani, haushande. Izvi ndezvekutarisa chete mitambo munguva chaiyo (rarama).
Pakupedzisira, shevedza pfungwa dzavo kuchokwadi chinotevera: sopcast haina kutsiva dzimwe nzira dzekuona tv online (flash, mms, nezvimwewo). Kana mutambo uripo mumamms, saka shandisa mms. Kana iwe uchikwanisa kuona kuburikidza nekupenya, shandisa flash. Iyi ingori imwewo nzira yekuwedzera yako yakawanda yezviitiko.
Rangarira ichi chinyorwa, sezvo zvichizonyanya kubatsira kutarisa iyo World Cup inowirirana kana mavhidhiyo e justin.tv (flash) asingashande.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Nzira yekutarisa iyo World Cup mitambo inorarama pane yedu Ubuntu?
Bhuku rako rekushandisa harishande. Paunenge uchiisa chirongwa icho chinoti:
sopcast-player: Inoenderana: sp-auth (> = 3.0.1) asi haizo gadza
NDINOSHAYA SEI WINDOWS KANA ICHI CHIITIKA !!
Oops! Wataura chokwadi, ndakanganwa kuwedzera izvozvo. Usati waisa sopcast iwe unofanirwa kuisa sp-auth. Cherekedza kuti ini ndangogadzirisa iyo posvo. Zvisinei, unogona kurodha pasi iro pasuru kubva apa: http://code.google.com/p/sopcast-player/downloa...
Iwe unogona zvakare kuisa Sopcast uchishandisa Ubuntu Tweak!
Ndinovimba ndanga ndiri kubatsira! Kumbundira! Paul.
Maitiro ekuisa chikamu muLinux
Gimp 2.8: chii chinotevera ...